ဘယ်သင်တန်းတက်ရမလဲ အကြံတောင်းချင်လို့ပါ (Nginx and PHP Fundamentals ၊ PHP MVC with CakePHP နှင့် C# ) - MYSTERY ZILLION
ဘယ်သင်တန်းတက်ရမလဲ အကြံတောင်းချင်လို့ပါ (Nginx and PHP Fundamentals ၊ PHP MVC with CakePHP နှင့် C# )
February 2014 in Idea
ရုံးက အွန်လိုင်း သင်တန်း ၂ခု တက်ဖို့ pluralsight ကနေရွေးချယ်ခိုင်းလို့ ဘယ်သင်တန်းတက်သင့်လဲဆိုတာ အကြံဥာဏ် တောင်းချင်လို့ပါ ။
ယခုလက်ရှိမှာတော့ ဘာframeworkကိုမှ မသုံးဘဲနဲ့ PHP သီးသန့်ရေးပါတယ် ။
- PHP framework ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ချင်ပါတယ် ။ အဲဒီဆိုဒ်မှာ CakePHP framework အတွက်ပဲ Tutorial ပါပါတယ် ။
- နောက်တခုက Nginx and PHP Fundamentals လို့ရေးထားပါတယ် ။ ဆိုဒ်တခုကို လုပ်ဆောင်ရည်ကောင်းပြီး ၊ ပေါ့ပါးအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ ရှင်းပြထားပါတယ် ။
နောက်တခုကတော့ C# နဲ့ပတ်သက်ပြီး တက်ချင်ပါတယ် ။ C# နားလည်ပြီးရင် ASP.Net ကိုကူးချင်လို့ပါ ။
သူ့မှာက Tutorial ၂၁ ခုရှိပါတယ် ။ C# ကိုတော့တခါမှမလေ့လာဖူးပါဘူး ။ Beginner ပြီးမှ Intermediate နဲ့ Advance တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ။
သူ့ရဲ့တချို့ Tutorial တွေက Beginner နဲ့ Intermediate ကို ၁ နဲ့ ၂ ခွဲထားပါတယ် ။
ကူညီပြီး အကြံဥာဏ်ပေးကြပါ ။
ရုံးက လက်ရှိ ဘာ web server သုံးနေလဲ ? တကယ်လို့ web server ကို Apache သာ သုံးနေရင်တော့ nginx က သိပ် အသုံးဝင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ Nginx ကို အသုံးပြုတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း nginx ကို မသိဘူးဆိုရင်တော့ Nginx and PHP Fundamentals ကို တက်သင့်တယ်။ Apache သာ သုံးနေရင်တော့ သိပ်ပြီး အထောက် အကူ ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး။
Nginx and PHP Fundamentals course မှာ PHP အခြေခံ နဲ့ Nginx အခြေခံ ပိုင်းပဲ ပါတယ်။ Nginx server Configuration ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ PHP အခြေခံ ။ နောက်ပြီးတော့ PHP composer အပိုင်းတွေ။ နောက်ပြီးတော့ hosting ပေါ် ဘယ်လို တင်ရမလဲ ဆိုတာပဲ ပါတယ်။ PHP လည်းတတ်ပြီးသား Nginx လည်း ရုံးက မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ မတတ်သင့်သေးဘူး။
CakePHP ကို တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ PHP MVC with CakePHP က မဆိုးဘူး ဆိုရမယ်။ မတတ်ခင် ကိုယ် ဘယ် framework ကို သဘောကျလဲ ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါ။
လက်ရှိ PHP မှာ လူသုံးများနေတဲ့ framework တွေက
စတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ framework တွေမှာ controller ဘယ်လို ဆောက်တယ်။ model ဘယ်လိုဆောက်တယ်။ view က ဘယ်လို သုံးလဲ စတာတွေကို အရင်လေ့လာကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ cake ကို သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ တတ်သင့်တယ်။
C# ပိုင်းမှာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Windows ပိုင်း နဲ့ ASP.NET ပိုင်း။ Windows ပိုင်းကို တတ်ရင် ASP.NET ပိုင်းကို နားလည် မှာ မဟုတ်ဘူး။ ASP.NET က code ကို နားလည်ချင်ရင်တော့ ASP.NET ကို တတ်သင့်တယ်။
အခုရုံးမှာ Apache web server ကို CentOS version5မှာသုံးတယ် ။
Apache လို Nginx ကလဲ Web Server အမျိုးအစားဘဲလား? သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ရည်များများလုပ်နိုင်ပြီး CPU နဲ့ Memory ကိုသက်သာစေတယ်လို့ရေးထားတာတွေ့တယ် ။ ဟုတ်လားမသိဘူး ။ ရုံးက Nginx မသုံးသေးဘူး ။ ဒါဆို ဒီတခုမတတ်တော့ဘူး ။
PHP MVC with CakePHP က အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ။
C# ကို ASP.Net Web အပိုင်းလေ့လာချင်တယ် ။
If you want to change, I prefer ASP .Net Most enterprise are using solid architecture such as .Net or Java. Enterprise jobs are more comfortable and suitable for girls. I don't mean gender discrimination, it's justasuggestion.
Thanks for your advice Bro Calm Hill. I will study ASP.Net too.
Call 09-422452184 , This training is good for c#
@lynlyndrupal suchin is in Singapore. She cannot takeaclass in Yangon.
sorry this training is in yangon.